Somaliland: Cali Khaliif Oo Sheegay Shir Lagu Taageeri Doono Qaranimada Somaliland - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Cali Khaliif Oo Sheegay Shir Lagu Taageeri Doono Qaranimada Somaliland
Somaliland: Cali Khaliif Oo Sheegay Shir Lagu Taageeri Doono Qaranimada Somaliland
Siyaasiga reer Somaliland Prof. Cali Khaliif Galaydh, ayaa ka hadlay xubno siyaasiyiin ah oo uu sheegay in ay doonayaan sidii ay u carqaladayn lahaayeen heshiiskii dhawaan ay wada galeen Somaliland iyo maamulkiisii Khaatumo.
Hadalka Cali Khaliif ayaa la xidhiidhay buuq iyo gacan ka hadal ka dhashay shir la doonayay in lagu taageero heshiiskii Khaatumo iyo Somaliland ay wada galeen oo habeen hore ka dhacay gudaha magaalada Buuhoodle. Kadib markii xubno ku sugnaa shirkaasi ay soo jeediyeen in xilka laga qaado Garaad Cabdirisaaq Garaad Soofe, oo ka mid madax dhaqameedka Sool. Cali Khaliif ayaa isagu dhacdadaasi ku tilmaamay mid aan loo dul qaadan Karin oo soo dhaaftay siyaasad maadaama oo ay isku bedeshay gacan ka hadal. Waxaanu yidhi “Siyaasad hada way dhaaftay oo gacan ka hadal ayay maraysaa. Shirarkoodda markay qabsanayaan lama dhibo, shirarkooda haddii ay isku kalsoon yihiina wixii dadka ay u sheegayaan haw u sheegaan, lagama baqayo waa niman aan isku kalsoonayn haddii ay inoo yimaadan. Kuwo odayaala oo Gadh Cas oo miisaska laagayana waan arkayay, Khaatumadii ayaa ka xumaate hala yaabina”.
Wuxuu sheegay in yoolka ay hiigsanayaan aanay cidna hor istaagi Karin. “Qadiyada aynu leenahay iyo habka aynu rabno in aynu yoolkeena, ku gaadhno cid hor istaagi kartaa ma jirto, iska hadlow Ina Igirre hayska jalabuteeyeen walee taariikhda buug xun ayay ka gelayaan.
Qaddiyaddana looma joojinayo waanaynu ku guulaysanaynaa, cida leh Khaatumo nagama wakiil aha. Nimanka leh dagaal baanu ka xignaa oo ragga islaameed ayaanu laynaynaa, waxaasina baala-xoofto ayaanu u aragnaa ugamana tegayno. Hawsha dhabteedu waxay tahay-na idinka ayaa leh, haddii ay xabad noola yimaada-na anagu xabad ku ridimayno”ayuu yidhi Prof. Galaydh.
Somalia: Qorshe La Doonayay In Xabsiga Lagaga Saaro Cabdi Iley Oo Fashilmay Iyo Kooxdii Watay Oo La Qabtay